ဆီပူေလာင္ရင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါက အမာရြတ္ေတာင္မက်န္ေစတဲ့ သဘာဝနည္း – Alanzayar
ဆီပူ ၊ရေႏွေးပူ တို႔နဲ႔အမြဲတေစ ထိေတွ႕နေရေသာ အိမ်ရွင်မျမားအတွက်ဒီနည်းေလးက တကယ်႕ကိုအဆင်ပြေစေမွာဖြစ်ပါတယ်။
ဆီပူေလာင်တာနဲ႔ ပတ်သတ်ပြီး နည်းလမ်းအၿမိဳးၿမိဳး၊ ေဆးနည်းအၿမိဳးၿမိဳးရွိတယ် ဆိုပေမယ်႕အခုေဖာ်ပြေပးမယ်႕နည်းလမ်းေလးကေတာ့ ထူးခြားတယ်လို႔ပဲေပြာရမယ်။
နည်းလမ်းကရိုးရွင်းလွန်းလို႔ ေၾလႇာ့မတွက်နဲ႔ေနာ်။ ၾကႇန်ေတာ့်သူငယ်ချင်း ပြန်လည်ျမႇဝေပေးခဲ့တဲ့နည်းေလးပါ။သူကိုယ်တိုင်အသုံးပြဳခဲ့တဲ့ လက်ေတွ႕နည်းပါလို႔ေပြာပါရေစ။
ဆီပူေလာင်ခဲ့ေသာ်ဆီပူေလာင်သည်႕နေရာ ကို ဆီစိမ်း (အသုံးမပြဳရေသးသည်႕ဆီ)ဖြင်႕ ရွွဲနစ်နေအောင် ခၾက်ချင်းလိမ်းေပးပါ။နာရီဝက်ခန်႕ကြာၾလႇင် သက်သာေျပာက်ကင်းသွာပါလိမ်႕မည်။
ရေကြည်ေဖာင်းမထ အမာရွတ်ကျန်ခဲ့မွာစိုးရိမ်စရာမလိုသည်႕အတွက်ဒီနည်းလမ်းကို ယုံကြည်စွာနဲ႔အသုံးပြဳလိုက်ပါလို႔ အကြံပြဳပါရေစ…. ။ေမတၱာျဖင့္ျပန္လည္မၽွေဝေပးပါေနာ္မူရင္းေရးသားသူ ႏွင့္ ဓာတ္ပုံပိုင္ရွင္မ်ားအား ေလးစားစြာျဖင့္ Credit ေပးပါသည္။
ဆီပူေလာင်ရင် ခၾက်ချင်းလုပ်ပါက အမာရွတ်ေတာင်မကျန်စေတဲ့ သဘာဝနည်းဆီပူ ၊ရေႏွေးပူ တို႔နဲ႔အမွဲတေစ ထိေတွ႕နရေသော အိမျရႇငျမမြားအတွကၿဒီနျညးေလးက တကၾယ့ကိုအဆငျပႇစေမွောဖွစျပါတၾယ။
ဆီပူေလာငၾတာနဲ႔ ပတၾသတျပႇီး နျညးလျမးအမြိဳးမြိဳး၊ ေဆးနျညးအမြိဳးမြိဳးရွိတၾယ ဆိုပမေၾယ့အခုေဖာျပႇေပးမၾယ့နျညးလျမးေလးကေတာ့ ထူးခွားတယႀလိဳ႕ပဲေပွာရမၾယ။
နျညးလျမးကရိုးရွျငးလွျနးလို႔ ေလႊာ့မတွကျနဲ႔ေနာျ။ ကႊနေၾတာ့ၾသဴငယျခႁငြး ပွနၾလညႁမႊဝေပေးခဲ့တဲ့နျညးေလးပါ။သူကိုယႀတိဳငၾအသုံးပႈခဲ့တဲ့ လကေၾတႇ့နျညးပါလို႔ေပွာပါရေစ။
ဆီပူေလာငျခဲ့ေသာႀဆီပူေလာငၾသျည့နေရာ ကို ဆီစိျမး (အသုံးမပႈရေသးသျည့ဆီ)ဖွျင့ ရွွဲနစျနေအောၿင ခကြျခႁငြးလိျမးေပးပါ။နာရီဝကျချန႔ကွာလႊၿင သကၾသာေပြာကၾကျငးသွာပါလိျမ့မျည။
ရကွေညေျဖာျငးမထ အမာရွတၾကႏြျခဲ့မွာစိုးရိမျစရာမလိုသျည့အတွကၿဒီနျညးလျမးကို ယုံကွညျစႇာနဲ႔အသုံးပႈလိုကျပါလို႔ အကွံပႈပါရေစ…. ။မေတ္တာဖြင်႕ပြန်လည်ျမႇဝေပေးပါေနာ်မူရင်းေရးသားသူ ႏွင်႕ ဓာတ်ပုံပိုင်ရွင်ျမားအား ေလးစားစွာဖြင်႕ Credit ေပးပါသည်။
ဆီပူ ၊ရနှေေးပူ တို့နဲ့အမွဲတစေ ထိတှေ့နရေသော အိမျရှငျမမြားအတှကျဒီနညျးလေးက တကယျ့ကိုအဆငျပွစေမှောဖွစျပါတယျ။
ဆီပူလောငျတာနဲ့ ပတျသတျပွီး နညျးလမျးအမြိုးမြိုး၊ ဆေးနညျးအမြိုးမြိုးရှိတယျ ဆိုပမေယျ့အခုဖောျပွပေးမယျ့နညျးလမျးလေးကတော့ ထူးခွားတယျလို့ပဲပွောရမယျ။
နညျးလမျးကရိုးရှငျးလှနျးလို့ လြှော့မတှကျနဲ့နောျ။ ကြှနျတော့ျသူငယျခငြျး ပွနျလညျမြှဝပေေးခဲ့တဲ့နညျးလေးပါ။သူကိုယျတိုငျအသုံးပွုခဲ့တဲ့ လကျတှေ့နညျးပါလို့ပွောပါရစေ။
ဆီပူလောငျခဲ့သောျဆီပူလောငျသညျ့နရော ကို ဆီစိမျး (အသုံးမပွုရသေးသညျ့ဆီ)ဖွငျ့ ရှှဲနစျနအေောငျ ခကြျခငြျးလိမျးပေးပါ။နာရီဝကျခနျ့ကွာလြှငျ သကျသာပြောကျကငျးသှာပါလိမျ့မညျ။
ရကွေညျဖောငျးမထ အမာရှတျကနြျခဲ့မှာစိုးရိမျစရာမလိုသညျ့အတှကျဒီနညျးလမျးကို ယုံကွညျစှာနဲ့အသုံးပွုလိုကျပါလို့ အကွံပွုပါရစေ…. ။မေတ္တာဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါနော်မူရင်းရေးသားသူ နှင့် ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်များအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။
ဆီပူလောငျရငျ ခကြျခငြျးလုပျပါက အမာရှတျတောငျမကနြျစတေဲ့ သဘာဝနညျးဆီပူ ၊ရနှေေးပူ တို့နဲ့အမှဲတစေ ထိတှေ့နရသေော အိမရြှငမြမွားအတှကဒြီနညြးလေးက တကယြ့ကိုအဆငပြှစမှေောဖှစပြါတယြ။
ဆီပူလောငတြာနဲ့ ပတသြတပြှီး နညြးလမြးအမွိုးမွိုး၊ ဆေးနညြးအမွိုးမွိုးရှိတယြ ဆိုပမယြေ့အခုဖောပြှပေးမယြ့နညြးလမြးလေးကတော့ ထူးခှားတယလြို့ပဲပှောရမယြ။
နညြးလမြးကရိုးရှငြးလှနြးလို့ လွှော့မတှကနြဲ့နောြ။ ကွှနတြော့သြူငယခြငြွး ပှနလြညမြွှဝပေေးခဲ့တဲ့နညြးလေးပါ။သူကိုယတြိုငအြသုံးပှုခဲ့တဲ့ လကတြှေ့နညြးပါလို့ပှောပါရစေ။
ဆီပူလောငခြဲ့သောဆြီပူလောငသြညြ့နရော ကို ဆီစိမြး (အသုံးမပှုရသေးသညြ့ဆီ)ဖှငြ့ ရှှဲနစနြအေောငြ ခကွခြငြွးလိမြးပေးပါ။နာရီဝကခြနြ့ကှာလွှငြ သကသြာပွောကကြငြးသှာပါလိမြ့မညြ။
ရကှညေဖြောငြးမထ အမာရှတကြနွခြဲ့မှာစိုးရိမစြရာမလိုသညြ့အတှကဒြီနညြးလမြးကို ယုံကှညစြှာနဲ့အသုံးပှုလိုကပြါလို့ အကှံပှုပါရစေ…. ။မတေ်တာဖွငျ့ပွနျလညျမြှဝပေေးပါနောျမူရငျးရေးသားသူ နှငျ့ ဓာတျပုံပိုငျရှငျမြားအား လေးစားစှာဖွငျ့ Credit ပေးပါသညျ။
Previous Article ရှေ့တန်းကိုမလိုက်ရလို့ ကားပေါ်ခိုးတက်ပြီး လိုက်လာတဲ့ PDF ရဲဘော်နှစ်ဦး (ရုပ်သံ)
Next Article ပ႐ုပ္လုံးသုံးတတ္သူမ်ားအတြက္ သတိျပဳၿပီးသုံး